शारीरिक कपाल महिलाहरु को लागि एक ठूलो समस्या छ। उनको एक मखमली छ के केटी चाहनुहुन्छ छैन, छाला निविदा? बरु, खुट्टा र underarms क्षेत्रहरूमा शेविंग पछि धेरै अर्को दिन palpable कडा ढाड हुन्छन्। कपाल हटाउने मोम - मिसिन एउटा ठूलो वैकल्पिक। बाल यस्तो प्रक्रिया पछि 3-4 सप्ताह को आफ्नो अभाव द्वारा खुसी छन् र यति कठोर र गाढा, शेविंग जस्तै हुर्किसकेका छैन। waxes को के प्रकार, सही बाहिर प्रक्रिया छ?
बाल हटाउनका लागि waxes
अनावश्यक वनस्पति को छुटकारा रही यस विधि केही स्रोतहरु अनुसार, यो पनि Nefertiti र क्लियोपेट्रा प्रयोग भएको थियो, वास्तवमा, सबै भन्दा प्राचीन छ। तर यो त धेरै वर्ष भएको छ भन्ने तथ्यलाई बावजुद, विधि को लोकप्रियता कम, एकदम विपरीत हुन जान्छ। सुंदरता उद्योग निरन्तर विकसित छ, र आज, पसलहरुमा, तपाईं फरक waxes को धेरै पाउन सक्नुहुन्छ। तिनीहरूले प्रयोग गर्दा मात्र होइन उत्पादकहरु द्वारा तर पनि तापमान द्वारा विभाजित छन्:
यो चिसो छ।
चिसो कपाल हटाउने प्राथमिकताको जहाँ hairs पातलो र छोटो छन् मामला मा बाहिर छ, र छाला संवेदनशील छ भने। कपाल हटाउने यस प्रकारको छैन लोकप्रिय किनभने लामो र पीडादायी छ।
न्यानो मोम कपाल हटाउने बिल्कुल सबै महिलाहरु फिट। यो पनि एक कम तापमान भनिन्छ। सञ्चालन र एकदम कम समय लाग्छ सबैभन्दा, सहज सजिलो प्रक्रिया। तर, यो थप खर्च हुनेछ। बैंकहरू र विशेष कैसेट मा बेचिएको न्यानो मोम कपाल हटाउने depilation संग अग्रानुक्रम मा प्रयोग गरिन्छ कि लागि। लाभ त्यहाँ बल्न को कुनै जोखिम छ भन्ने छ।
तातो कपाल हटाउने प्रक्रिया समयमा विशेष हेरविचार र सावधानी आवश्यक छ। केटी कहिल्यै यस्तो कपाल हटाउने विधि सामना गरिएको थियो भने, यो घर मा आफ्नै सबै कदम दोहोर्याउन कठिन हुनेछ। तर तातो मोम संग कपाल हटाउने हुनत बेचैनी अझै पनि छ, सबै तीन विधिहरू सबैभन्दा पीडारहित छ।
प्रकार र निर्माताहरु: बाल हटाउनका लागि जो waxes उपलब्ध व्यावसायिक छन्
त्यसैले, त्यहाँ माथि लेखिएको थियो जो यो उत्पादन,3मुख्य प्रकार हो। तर एक महिला खरीद गर्दा रुचि को समस्या सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ: बाल हटाउनका लागि मोम पनि धेरै प्रकारका, अर्थात् छ:
कारतूस मा। आर्थिक र धेरै सुविधाजनक विकल्प, नियमित घर प्रयोगको लागि ठूलो छ। को मोम विशेष नलिका को माध्यम द्वारा शरीर सतह मा वितरण गरिएको छ। यसलाई तुरुन्तै यो विकल्प न्यानो Waxing implies रूपमा, कि गरम गर्न उत्पादन छ, खरिद Voskoplav पूरा गर्न मनमोहक छ। शरीर को एक ठूलो भाग लागि थप कागज पट्टी आवश्यक पर्दछ।
बैंकहरुमा। लाभ यो मायालु हालतमा बनेको छ भन्ने छ। तर व्यवसायीक प्रयोग मोम को सामान्यतया यो प्रकार। यो पहिलो 37-38 डिग्री गर्न एक विशेष उपकरण वा (प्याकेज यो बिन्दु बारेमा) को माइक्रोवेव मा preheated छ, र त्यसपछि छाला मा एक स्पाटुला संग लागू र पहिले नै कागज स्ट्रिप्स हटाइयो।
को briquettes। यो तातो waxes पूर्ण शरीर को एक ठूलो क्षेत्र संग बाल हटाउनका लागि अनुकूल छन्, जो, र क्षेत्रहरु जहाँ कठोर hairs मा।
को granules। यस्तो nasolabial त्रिकोण रूपमा सानो क्षेत्रमा लागि आदर्श। तीव्र गतिमा पिघलने र सजिलै लागू गरियो।
ड्राइव। यो फेरि एक हट मोम कपाल हटाउने छ, तर यो मोटा र राम्रो गुणस्तर छ कि अलग छ। यस घनिष्ठ क्षेत्र र अनुहार को नाजुक छाला लागि ठूलो विकल्प। यो 45-47 डिग्री को एक तापमान मा पिघलने।
विशेषज्ञ वा सरल कस्मेटिक पसल, तपाईंले यी उत्पादनहरु को धेरै देख्न सक्छौं। सबै भन्दा लोकप्रिय निर्माता:
कारतूस: Depilflax, Veet, सेतो रेखा, Cristaline, MAYSTAR NeoPlox, Depilia, रिका, Kapous, Depileve।
क्यान्ड मोम: Depilflax, Veet, ग्रह नङ, DepiProf, Xanitalia, सेतो रेखा, JessNail।
Briquettes: Depilflax, सेतो रेखा, आर्को Cosmetici, Worldepil।
Granules: सेतो रेखा, Depilflax, Depilica।
डिस्क: Kapous, सौन्दर्य छवि, सेतो रेखा, Depilflax।
waxes को समीक्षा: सबै भन्दा राम्रो चयन कसरी गर्ने?
सबै भन्दा लोकप्रिय व्यावसायिक लाइन Depilflax छ। स्पेनको कम्पनी फरक प्रकारका हेयर हटाउनका लागि मोम उत्पादन र रूसी महिला बीच एक मनपर्ने छ। साथै, Depilflax कपाल हटाउने पछि छाला हेरविचार लागि कस्मेटिक्स एक श्रृंखला प्रदान गर्दछ।
पनि लोकप्रिय निर्माताहरु सेतो रेखा, Veet, Kapous, रिका, सौन्दर्य छवि र Depilia छन्। यी ब्रान्डहरु गुणस्तर प्रसिद्ध Depilflax भन्दा झन् खराब छ जो मोम, विभिन्न प्रकारका प्रस्ताव।
जब सबैभन्दा ध्यान छनौट मात्र ब्रान्ड, मोम को प्रकार रूपमा भुक्तानी गर्नुपर्छ। हामी यो भाग को प्रश्न विचार भने सबैभन्दा खराब अवस्थामा चिसो epilation सकिन्छ। यो गाह्रो थप पीडादायी छ र अब रहन्छ। तपाईं आवश्यक ज्ञान र अभ्यास छैन भने तातो, बल्न सक्छ। तर यो विकल्प लगभग पीडारहित छ। न्यानो मोम संग कपाल हटाउने घरमा प्रक्रिया पूरा लागि सबै भन्दा राम्रो तरिका हो।
उचित Waxing कुनै पनि नकारात्मक प्रभाव कारण छैन। तर तपाईं प्रक्रिया समयमा गल्ती बनाउन भने, तपाईं अप्रिय प्रभाव को एक किसिम को अनुभव हुन सक्छ, र यो मात्र कपाल हटाउने प्रक्रिया छैन लागू हुन्छ, तर पनि फलो-अप गर्न हेरविचार। यो जला वा एलर्जी प्रतिक्रिया, र को घटना ingrown बाल, प्राप्त गर्ने कडा छुटकारा। कपाल हटाउने अन्य बेफाइदा:
को hairs इच्छित लम्बाइ फिर्ता बढ्न सम्म प्रतीक्षा गर्न आवश्यक;
बाँकी साना कपाल र नसक्नुको तिनीहरूलाई हटाउन;
रातो डट्स को रूप मा दाह।
तर यी सबै बेफाइदा हटाउन सकिन्छ। उदाहरणका लागि, दुखाइ प्रत्येक समय कम सजिलै देखिने हुनेछ, र पूर्ण हटाउँदछ दाह समाधान "chlorhexidine" वा अन्य घाउ आदिमा रोगाणु नाश गर्ने। एक पटक आफ्नो छाला हटाउन पर्याप्त छ, र रातो डट्स बिस्तारै गायब। हामी hairs इच्छित लम्बाइ फिर्ता बढ्न गर्दा मात्र बाँच्न सक्छ, र अझै उनलाई मध्ये एक सानो हुनेछ।
पेशेवरों शुक्लपक्ष :
घरमा प्रक्रिया पूरा को संभावना;
फिर्ता बढन hairs रूपमा कडे छैन;
वनस्पति वृद्धि को शरीर मा समय को खण्ड संग सुस्त हुनेछ।
तपाईं शुक्लपक्ष अगाडि, तपाईं पूरा गर्न चाहे यो प्रक्रिया गर्न सकिन्छ थाहा हुनुपर्छ। यसलाई निम्न अवस्थामा contraindicated छ:
अभिप्रेत गन्तव्य epilation मा छाला को निष्ठा गर्न क्षति;
सक्रिय चरण मा छाला विकार।
आत्म-उपयोग मोम लागि निर्देशन
घर सही मा शुक्लपक्ष कसरी गर्छन्? पहिले, प्रक्रिया epiliruemy छाला धुन अघि, यो राम्रो भोकमरी र degrease। दोश्रो, यदि समय अनुमति दिन्छ, यो राम्रो pores स्टीम छ। देखि प्रक्रिया धेरै कम दर्दनाक छ। यो सबै भन्दा राम्रो "क्लच" मोम hairs लागि आवश्यक छ।
मुद्रण कारतूस प्रयोग:
को सुरक्षा फिलिम हटाउन;
ताप (25 मिनेट) प्रतीक्षा;
मोम स्ट्याकमा क्यासेट पल्टाउन;
, कागज रूपमा मोम को पट्टी को लम्बाइ साथ लगभग एउटै बनाउने बाल विकास को दिशा मा छाला मा रोलर पकड;
congeal यो दिन;
कपाल हटाउने, यो, एक सानो एक हात र अन्य संग तल तान्नु छाला कागज पट्टी को नि: शुल्क अन्त लिन र बाल विकास विरुद्ध जोडले तान्न प्रेस को एक पट्टी संलग्न गर्न शीर्ष;
छाला को सबै क्षेत्रमा हेरफेर दोहोरिन;
कागज पट्टी धेरै पटक प्रयोग गर्न सकिन्छ;
आवश्यक preheated मोम;
कपाल हटाउने पछि छाला पोसिलो वा विशेष क्रीम उपचार गर्न।
यसलाई पगाल्न र तापमान लागू र छाला साइट मा एक स्पाटुला संग फैलाउन सहज नभएसम्म त्यसपछि प्रतीक्षा: बैंक मा, साथै briquettes, छर्रों र डिस्क को रूप मा उत्पादन प्रयोग नै सिद्धान्त मा हुन्छ। अर्को, कागज पट्टी संलग्न र यसलाई माथि लेखिएको थियो, बाल हटाउने प्रदर्शन - वृद्धि विरुद्ध तीव्र आन्दोलन।
चिसो मोम अप खुसीले गदगद छैन, गर्न मात्र कुरा - यो थप तरल र लागू गर्न सुविधाजनक बनाउन न्यानो पानी एक गिलास मा एक ट्यूब राख्न। 45-48 - न्यानो संरचना 37-38 डिग्री छ, र तातो हुनुपर्छ। ताप लागि विशेष उपकरण प्रयोग गरेर, र यो उपयुक्त माइक्रोवेव वा पानी स्नान छैन भने।
कसरी सबै भन्दा कठिन क्षेत्रमा शुक्लपक्ष गर्छन् - घनिष्ठ?
कुनै आश्चर्य छाला सबैभन्दा पहुँच कठिन मानिन्छ। वास्तवमा, कपाल हटाउने बिकनी मोम मा घर - शुरुआती लागि कार्य, त्यसैले यो सबै भन्दा राम्रो एक सैलून जाने छ। तर, यो किनभने लजालु सबै हल छैन। अर्को विकल्प - को खुट्टा र underarms मा राम्रो कसरत र त्यसपछि घनिष्ठ क्षेत्रमा अगाडि बढ्नुहोस्।
प्रक्रिया कम दर्दनाक छ त - छाला संवेदनशील भएकाले, यो राम्रो तातो मोम प्रयोग छ। उसलाई बाल विकास मा राख्न dries आवश्यक एक स्पाटुला वा क्यासेट प्रयोग गरेर र कहिले, कागज पट्टी संलग्न र जोडले तान्न। मुख्य बेफाइदा यो कारणले बाल विकास को दिशा गर्ने अधिकार हात JERK बनाउन कठिन छ भन्ने तथ्यलाई मा निहित।
गहिरो एपिलेशन को घनिष्ठ क्षेत्रमा पूर्ण कपाल हटाउने समावेश, यो पनि "ब्राजिलियन" भनिन्छ। सिद्धान्त र प्रक्रिया को नियम समान छन्। मुख्य कुरा यहाँ - प्रत्येक पट्टी हटाउन पनि पीडादायी थियो र केही उत्पादन भनेर, एक सहज स्थिति पत्ता लगाउन।
खुट्टा कपाल हटाउने - प्रक्रिया "बाट" छ र "गर्न"
को खुट्टा मा बाल हटाउन, शायद सबैभन्दा सरल प्रक्रिया। यसको लागि चिसो वा न्यानो मोम प्रयोग गर्न सकिन्छ। सामान्यतया epilation संग खुट्टा तल सुरु, तर सिद्धान्त यो कुरा छैन।
यो खुट्टा मा बाल नै निर्देशन बढ्न देखिन्छ तापनि वास्तवमा यो छैन। बाल हटाउन सफल थियो, तपाईं यसलाई ध्यान, र त्यसपछि आवश्यक रूपमा यसलाई हटाउन मोम लागू गर्न आवश्यक छ। विशेष गरी यो खुट्टा को शीर्ष सम्बन्धित छ।
को Underarm क्षेत्रमा कपाल हटाउने मोम
प्रभावकारी बाल हटाउनका लागि यो क्षेत्र मा hairs बढ्दै किनभने, दुई तरिकामा गर्न सिफारिस गरिएको छ। पहिलो न्यानो मोम स्पाटुला तल आन्दोलन र माथितिर हटाइएको एक JERK पट्टी लागू, र त्यसपछि निर्देशन परिवर्तन।
घरमा शुक्लपक्ष: सुझावहरू
प्रक्रिया तिनीहरूले पहिले नै छ भने, ingrown hairs को घटना रोक्न वा हटाउनु गर्न, छाला साफ व्यवहार गर्न अघि यो दिन को लागि मनमोहक छ।
एक विशेष मोम पहिलो पटक प्रयोग गरिएको छ भने 24 घण्टा बाहिर एक एलर्जी परीक्षण पूरा गर्न। को संरचना को कुनै पनि घटक गर्न एलर्जी विकास हुन सक्छ।
छोटो (5 भन्दा कम मिमी) को रूपमा hairs हटाउन प्रयास नगर्नुहोस् - दुखाइ बाहेक, त्यहाँ कुनै असर हुनेछ।
तर तिनीहरू पूर्णतया धेरै ठूलो हुर्किसकेका नभएसम्म प्रतीक्षा छैन - को मोम लामो hairs लिन सक्दैन।
प्रक्रिया अघि र पछि दिन sunbathe र धूपघडी प्रयोग गर्न सक्दैन।
एक क्रीम epilation पहिला लागू गर्न आवश्यक छैन, त्यसको विपरीत, छाला degreased गर्नुपर्छ। मात्र कुरा प्रयोग गर्न सकिन्छ कि - एक विशेष शरिरका कुनै भाग बेहोस बनाउन दिइने औषधि लेप वा स्प्रे (कम दुखाइ सीमा)।
प्रक्रिया पछि 8 घण्टा भित्र पानी संग सम्पर्क गर्न अवांछनीय छ।
3 दिन पछि, यो एक साफ संग एक फिर्ता exfoliation बनाउन सिफारिस गरिएको छ।
छाला शुक्लपक्ष पछि घाउ आदिमा रोगाणु नाश गर्ने ( "Miramistin" वा "chlorhexidine") संग पहिलो उपचार गर्न, र एक समय एक पौष्टिक क्रीम, मलम राख्न पछि, बाल विकास, वा तेल slows। भने, प्रक्रिया पछि, पानी लाउनु, निको अलि लामो हुनेछ। त्यसैले, यो कम्तिमा पनि 8 घण्टा को लागि एक स्नान ले छैन वा के यो दिन मा मनमोहक छ। सामान्य मा, प्रक्रिया मात्र "हातमा भर्न" र कपाल हटाउने को मूल कुराहरू बुझ्न आवश्यक छ, र त्यसपछि कुनै समस्या उत्पन्न हुनेछ, सरल र सुरक्षित छ।
प्लास्टिक अनुहार मालिश - एक स्केलपेल बिना सौन्दर्य र युवा
लिली टाटु: इतिहास, महत्त्व, विशेष गरी
यो हाइड्रोलिक बूस्टर स्टीयरिंग मा तरल पदार्थ परिवर्तन गर्न आवश्यक छ?
ईटाईको लागि चिनिने जालहरूको आकार (GOST)
शब्द को प्रतीकात्मक अर्थ, वा दोस्रो जीवन